VaBiti naVaColtart Vanowirirana paNyaya yeMari dzeKubatsirikana
Gurukota rezvemari, VaTendai Biti, pamwe negurukota rezvedzidzo, VaDavid Coltart, vanonzi vakasangana neChipiri vakawirirana kuti mari dzekubatsirikana dziri kupiwa varairidzi nevabereki dzisabatirwe mutero.
Izvi zvinotevera danho rakanga ratorwa nebazi reZimbabwe Revenue Authority, ZIMRA, rekubata mitero pamari idzi, izvo zvakanga zvokonzera bowabowa muvarairidzi.
Vamwe varairidzi vakanga vatozivisa kuti vaizoramwa mabasa kana hurumende ikaramba ichivabatira mitero.
Bato reZanu PF, kuburikidza nemunyori waro wezvedzidzo, VaSikhanyiso Ndlovu, rakanga raburitsawo mashoko ekukurudzira ZIMRA kuti isiyane nenyaya yekubatira varairidzi mitero pamari dzekubatsirikana idzi, richiti danho iri raizodzosera shure nyaya yedzidzo munyika kuburikidza nekusafara kwevarairidzi.
Munyori mukuru musangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association, Zimta, VaRichard Gundani, vanoti sangano ravo rinotambira nemufaro danho iri. VaGundani vatiwo mapato ezvematongerwo enyika anofanirwawo kutaura zvakanyanya pamusoro pekubatwa zvakanaka kwevarairidzi, sezvaitwa neZanu PF.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, VaTakavafira Zhou, vanotiwo vanofara nedanho rakatorwa nemakurukota maviri aya.
Asi VaZhou vanoti Zanu PF isanyepere kuita seinoda varairidzi, asi ichinyarara kana vachishungurudzwa nenhengo dzayo, zvikuru mumaruwa.